Chuntyin သည် ၂၀၂၁ ဒေတာ အစီရင်ခံစာကို အသုံးပြုသူ ဦး စားပေး ဖော်ပြ သည် – Pandaily
Jan 05, 2022, 22:12ညနေ 2022/01/07 23:41:16 Pandaily
ဗုဒ္ဓဟူး နေ့တွင်Vanyin သည် ၂၀၂၁ ခုနှစ် အချက်အလက် အစီရင်ခံစာကို ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။အသုံးပြုသူ ဦး စားပေး မှုများ၊ အကြောင်းအရာ ဖန်တီး မှုနှင့် စီးပွား ရေးဆိုင်ရာ တန်ဖိုး များအရ ပလက်ဖောင်း တွင် အပြောင်းအလဲ များ ကိုဤ အစီရင်ခံစာ ကဖော်ပြသည်။
တရုတ် သီချင်း ဟောင်း များ အသစ် ဖြစ်လာ သည်
၂၀၂၁ ခုနှစ်တွင် အသုံးပြုသူ ၉၈. ၉၇ သန်း သည် “ သီချင်း ဟောင်း များ” ကိုရှာဖွေ ခဲ့ကြသည်။ နှစ်ပေါင်း ၂၀ ကျော် ဖြန့်ချိ ခဲ့သော်လည်း ဂန္ထဝင် တရုတ် သီချင်း များစွာ သည်ဤ ပလက်ဖောင်း ပေါ် တွင်အလွန် ရေပန်းစား သည်။ ၂၀၂၁ ခုနှစ်တွင် အစီရင်ခံစာ မှ ရွေးချယ် ထားသည့် ထိပ်တန်း လွမ်းဆွတ် မှုဆိုင်ရာ ဂန္ထဝင် သီချင်း ၁၀ ခုအနက် အသက် အကြီးဆုံး သီချင်း မှာ ၁၉၈၅ ခုနှစ်တွင် ထုတ်ဝေ ခဲ့သော “ I and My Motherland” နှင့် ၂၀၀၇ ခုနှစ်တွင် ထုတ်ဝေ ခဲ့သော “ Ida Field” ဖြစ်သည်။
ကောလိပ် နှင့် တက္ကသိုလ် ဖွင့်လှစ် သော အတန်း များ ၏စုစုပေါင်း ကြည့်ရှု ချိန်သည် နာရီ ၁. ၄၅ သန်း ဖြစ်သည်
အစီရင်ခံစာအရ ၂၀၂၁ ခုနှစ်တွင် အင်တာနက် သုံးစွဲသူများ သည်စုစုပေါင်း နာရီ ပေါင်း ၁. ၄၅ သန်းကျော် ကြည့်ရှု သည့် နာရီ ပေါင်း ၁. ၄၅ သန်းကျော် ဖြင့် တုန်လှုပ် နေသော ကောလိပ် များနှင့် တက္ကသိုလ် များရှိ ပွင့်လင်းသော သင်တန်း များကို နှစ်သက် ကြသည်။ ထို့အပြင် Tsinghua တက္ကသိုလ်၊ ပီကင်း တက္ကသိုလ် နှင့် Xiamen တက္ကသိုလ် တို့သည် တိုက်ရိုက် ကြည့်ရှု သူ သုံး ဦး တွင် ထိပ်ဆုံး တွင်ရှိသည်။ ၂၀၂၁ ခုနှစ် တွင်လည်း သုံးစွဲသူ ၁၁. ၃၈ သန်း နီးပါး သည် Tsinghua တက္ကသိုလ်မှ တိုက်ရိုက် ထုတ်လွှင့် သည့် သင်တန်း ကိုကြည့်ရှု ခဲ့ကြသည်။
Shouyin တွင် လူကြိုက် အများဆုံး အများပြည်သူဆိုင်ရာ သင်တန်း ၁၀ ခုတွင် Tsinghua တက္ကသိုလ် နှင့် ပီကင်း တက္ကသိုလ် တို့တွင် ထိုင်ခုံ ၅ ခုရှိသည်။ အများပြည်သူဆိုင်ရာ သင်တန်း များအားလုံး အနက် Tsinghua တက္ကသိုလ်မှ The Economics in Life မှ ဂန္ထဝင် အထွေထွေ သင်တန်း သည် ၂၀၂၁ ခုနှစ်တွင် စင်မြင့် ပေါ်တွင် လူကြိုက် အများဆုံး တိုက်ရိုက် ထုတ်လွှင့် သည့် အများပြည်သူ သင်တန်း ဖြစ်ပြီး ကြည့်ရှု သူ ၁ သန်းကျော် သည်။
တရုတ် ရိုးရာ အနုပညာ အိမ်ရှင် သည် ၂၃ ၂% ပိုမို ရရှိ သည်
၂၀၂၁ ခုနှစ်တွင် ရိုးရာ ယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာ အကြောင်းအရာ များသည် တုန်လှုပ် ချောက်ချား စေသည်။ အမျိုးသား ဒြပ် မဲ့ ယဉ်ကျေးမှု အမွေအနှစ် စီမံကိန်း ၁၅ ၅၇ ခုအနက် ၉၉. ၄% ကို ပလက်ဖောင်း ပေါ်တွင် ရှာဖွေ နိုင်သည်ဟု အစီရင်ခံစာ ကဖော်ပြသည်။
၂၀၂၁ ခုနှစ်တွင် Shunyin တွင် လူကြိုက် အများဆုံး intangible ယဉ်ကျေးမှု အမွေအနှစ် စီမံကိန်း ၁၀ ခုသည် Yue အော်ပ ရာ၊ Huangmei အော်ပ ရာ၊ ပေကျင်း အော်ပ ရာ၊ Huanggu အော်ပ ရာ၊ Henan, Shaanxi နှင့် Sichuan အော်ပ ရာတွင် ဖျော်ဖြ ေသော အနုပညာရှင် များအပြင် ပြဇာတ် များစွာ ဖြစ်သည်။ အပြန်အလှန် ဆွေးနွေး မှုများ၊ Liuzhou မြစ် ခရု ဆန် ခေါက်ဆွဲ နှင့် Shaanxi မြောက်ပိုင်းရှိ ရိုးရာ သီချင်း များ လည်းရှိသည်။
မကြာသေးမီနှစ်များအတွင်း ရိုးရာ ယဉ်ကျေးမှု ကိုတိုက်ရိုက် ထုတ်လွှင့် ခြင်း သည်ပိုမို အာရုံစိုက် လာခဲ့ပြီး အင်တာနက် အသုံးပြုသူများ ၏အွန်လိုင်း ဆုလာဘ် များသည်ဤ ယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာ ထုတ်ကုန် များသို့ ဘဝ အသစ်ကို ထိုးသွင်း ပေးခဲ့သည်။ ရိုးရာ ယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာ အိမ်ရှင် ၏ ၀ င်ငွေသည် တစ်နှစ်လျှင် ၁၀၁% တိုးတက်ခဲ့ပြီး တရုတ် Quyi အိမ်ရှင် ၏ ၀ င်ငွေသည် တစ်နှစ်လျှင် ၂ ၃၂% တိုးတက်ခဲ့သည်။
Like ၂. ၄ ဘီလီယံကျော် ရရှိ ခဲ့သည့် ကျေးလက် အကြောင်းအရာ ဗီဒီယို
အဆိုပါ အစီရင္ခံစာအရ Shake Sound ေပၚရွိ ေက်းလက္ေဒသ အေၾကာင္းအရာ ဗီဒီယို သည္ ၂၀၂၁ ခုႏွစ္တြင္ Like အႀကိမ္ ေရ ၂ ဒသမ ၄ ဘီလ်ံ ေက်ာ္ ရရွိခဲ့သည္။ ရိုးရာ ယဉ်ကျေး မှုကြောင့် လူသိများသော ကျေးရွာ များအနက် ဟူ နန် ပြည်နယ်ရှိ Shuidong ကျေးရွာ၊ Zhejiang ရှိ Maoyuan ကျေးရွာ၊ Xinjiang ရှိ Hemu ကျေးရွာ၊ Shaanxi ရှိ Yuanjia ကျေးရွာနှင့် Hebei ရှိ Dawa ကျေးရွာ တို့သည် ၂၀၂၁ ခုနှစ်တွင် ကမ္ဘာလှည့်ခရီးသည် အများဆုံး ကိုဆွဲဆောင် နိုင်ခဲ့သည်။
ဘေဂျင်း မြို့သည် Like ၉. ၄ ဘီလီယံ ရရှိခဲ့ပြီး ၂၀၂၁ ခုနှစ်တွင် Breakvoice တွင် လူကြိုက် အများဆုံး မြို့ ဖြစ်သည်ဟု အစီရင်ခံစာ ကဖော်ပြသည်။ Hangzhou West Lake Scenic Spot သည် ၂၀၂၁ ခုနှစ်တွင် Shunyin ရှိ လူကြိုက် အများဆုံး ဆွဲဆောင်မှု ၁၀ ခု တွင်ပထမ နေရာတွင် ရပ်တည် ခဲ့ပြီး အသစ် တီထွင်ထားသော Global Beijing Resort သည် ၂၀၂၁ ခုနှစ်တွင် မဖြစ်မနေ လည်ပတ် ရမည့် နေရာ တစ်ခုဖြစ်လာသည်။
ကြည့်ရှု ရန် App ကို သတိပေး သူ သုံးစွဲ သူများ၏ ၄၆% သည် အသုံးပြုမှု ကြာချိန် ကိုသိသိသာသာ လျှော့ချပေး သည်
ထုတ်ကုန် ၏လုပ်ဆောင် နိုင်စွမ်း တိုးတက် မှုကိုလည်း အစီရင်ခံစာတွင် မျှဝေ ထားသည်။ ၂၀၂၁ ခုနှစ် ဒုတိယ နှစ်ဝက် တွင် Chuntone သည် ကြည့်ရှု သူများအား ဖန်သားပြင် မှ အနားယူ ရန် သတိ ပေးသည့် ကိရိယာ များအပါအ ၀ င် အချိန် စီမံခန့်ခွဲမှု ကိရိယာ များစွာ ကိုမိတ်ဆက်ခဲ့သည်။ သတိပေး ချက်များကို ဖန်သားပြင် ပေါ်တွင် ရော အသံ ဖြင့် ပါ ပြသ ထားသည်။
ဒါ့အပြင် ကြည့် ပါ:Chakito, TikTok သည် အသုံးပြုသူ မှပေးသော ဗီဒီယို တို “ ဆု” အင်္ဂါရပ် ကိုစတင် ခဲ့သည်
၂၀၂၁ ခုနှစ်တွင် Chunyin သည် နေ့စဉ် သန်းပေါင်း ရာနှင့်ချီ သော အလယ်အလတ် အသုံးပြုမှု သတိပေး ချက်များ ကိုထုတ်ပေး ကြောင်း အစီရင်ခံစာ ကဖော်ပြသည်။ ထို သတိပေး ချက်များကို လက်ခံရရှိသည့် အသုံးပြုသူ ၄၆ ရာခိုင်နှုန်းသည် ကြည့်ရှု ချိန် ကိုသိသိသာသာ လျှော့ချခဲ့သည်။